Obere Ntughari-Ugwu UTH N'okpuru Onye Na-ekpuchi Tank China Manufacturer
Nkọwa:UTH N'okpuru ihe nkiri tankị,Mgbasa-Ugwu UTH N'okpuru Tank Heater,UTH N'okpuru ebe a na-ekpo ọkụ tank
Home > Ngwaahịa > Nkịtị Nkịtị Na-emepụta Ihe > N&#39;okpuru kpo akwa tank > Obere Ntughari-Ugwu UTH N&#39;okpuru Onye Na-ekpuchi Tank
Ihe Nlereanya.: F034-9
N'okpuru ikpo ọkụ ọkụ iji kpoo okpomọkụ ikuku nke ụbụrụ nke terrarium, nkezi nke ogo ise ruo 10 (F) dị ọkụ karịa okpomọkụ ụlọ. Ọnọdụ siri ike nke nichrome mmemme kpo ọkụ na UL / CSA kwadoro ụdọ ike. Nkwụnye ụgwọ naanị pennies ụbọchị iji rụọ ọrụ.
Nke a n'okpuru Azụ Azụ akụrụngwa akuku aquarium ka e mere maka ikpo ọkụ tank. N'elu ihe ọkụkụ na-ekpo ọkụ dị elu, ihe ntanye kpo oku nwere ike ịchịkwa ike na-akpaghị aka, na-echekwa ọnọdụ okpomọkụ na mbara igwe ọbụna oyi oyi. nye gị nchekwa zuru oke na anụ ụlọ gị. Tụkwasị na nke a, ihe onwunwe nke PET kpo ọkụ na-eme ka mpe akwa ahụ dịgidere na-agbanwe agbanwe. Anyị na-enye OEM tank tank mmiri na-ekpo ọkụ na mmiri. Na gị chọrọ, anyị nwere ike ahaziri ngwaahịa ị chọrọ Azụ Azụ Azụ Aquarium anyị na-emebe iji hụ CE, RoHS, Ul, ETL ụkpụrụ.
UTH N'okpuru ihe nkiri tankị Mgbasa-Ugwu UTH N'okpuru Tank Heater UTH N'okpuru ebe a na-ekpo ọkụ tank N'okpuru ihe nkiri na tankị N'okpuru akwa akwa tank Nnukwu ihe nkiri Ntanetị Wet N'okpuru ebe a na-ekpo ọkụ tank Nnukwu ihe nkiri anụ ọhịa